Halyayga Xulka Qaranka Argantina Ee Hernán Crespo Oo Ku Eedeeyay Lionel Messi In Mauro Icardi Uu Ka Maqnaado Koobka Aduunka Ee 2018. – GOOL24.NET
Halyayga Xulka Qaranka Argantina Ee Hernán Crespo Oo Ku Eedeeyay Lionel Messi In Mauro Icardi Uu Ka Maqnaado Koobka Aduunka Ee 2018.
Weeraryahankii hore ee xulka qaranka Argentina Hernán Crespo ayaa ka maqan maqnaanshaha xidiga kooxda Inter Milan Mauro Icardi xulkiisa Argantina koobka aduunka soo aadan 2018 ka dhici doona dalka Russia sabab buuxda kaga dhigay inuusan xidhiidh saaxiibtinimo uusan la laheyn halyayga kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Hernán Crespo ayaa wareysi uu la yeeshay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ku sheegay: “Hadii aan ku sugnaan lahaa Inter ma iibin lahayn Mauro Icardi, maxay noqon laheyd jawaabta taageerayaasha haddii aan iibiyo ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda iyo kabtankooda”.
Halyayga xulka qaranka Argantina ayaa wuxuu hadalkiisa intaas sii raaciyay: “Ma aqaano kooxaha ku dhiiranaada iibinta ciyaartoydooda ugu fiican ay heystaan, waa inaad dhistaa ciyaaryahanka ugu muhimsan, islamarkaana waxaad raadisaa koox aad ku taageeri karto oo u ogolaada inuu sameeyo sida ugu fiican”.
Crespo oo xaqiijinayay in kadib Messi iyo Ronaldo uu Icardi yahay weeraryahanka saddexaad ayaa wuxuu yiri: “Ka dib Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, wuxuu noqonayaa gool dhaliyaha ugu sareeya ee booska kaalinta seddexaad, Mauro Icardi.”
Waxay u muuqataa in Mauro Icardi uusan qeyb ka noqon doonin Koobka Aduunka 2018 iyadoo go’aankaas ka yimid macalinka Argentina Jorge Sampaoli. Crespo ayaa aaminsan in tani ay sabab u tahay saaxiibtinimo la’aanta Mauro iyo Lionel Messi.
Hernán Crespo ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xidhay: “Fikradeyda, sababtoo ah ma ahan saaxiibka Messi, kooxda xulka waxaa lagu soo sameeyay Argantina sidaas darteed Mauro Icardi qeyb kama ahan mana ciyaari doono koobka aduunka, waa qalad weyn, Argentinana waxay u baahan tahay isaga”.